Nalaina ny angano sy banky misahana ny Banky Offshore
Banky Offshore dia avy amin'ny stigma. Noho izany, maro ireo mpandraharaha sy matihanina matihanina no tsy mahazo. Ny sasany aza manamarika fa afaka mitazona ny volany ao anatin'ny kaontin'ny banky any ivelany izy ireo. Ny sarin'ireo sambo mandeha haingana sy lafo vidy, kingpins, ary akanjo fotsy dia tonga ao an-tsaina. Ankoatr'izay, ny fihanaky ny sarimihetsika Hollywood ratsy, ny fahitalavitra ary ny sary ratsy amin'ny mpanao gazety dia tsy nanova izany fomba fijery izany. Tsy afaka avy lavitra ny fahamarinana izy ireo.
Ny fomba tena ampiasain'ny olona amin'ny famatsiam-bola any ivelany
Ny zava-misy dia izao. Ivontoerana ara-bola any ivelany (OFC) na banky, fantatra koa hoe toeram-pivarotana hetra, noho ny antony marobe. Izy ireo dia afaka manampy amin'ny fanomezana fiarovana ny fananana, ny fitomboan'ny fananana ary ny fampihenana hetra - miankina amin'ny fanapahana anao. Fantatray ireo andrim-panjakana toy izany hamelomana ny olon-tsotra sy ny orinasam-barotra, na lehibe na kely, manerana an'izao tontolo izao.
Ny fialokalofana ny kaonty any ivelany sy ny foibe ara-bola dia afaka manolotra vahaolana eran'izao tontolo izao amin'ny maro amin'ireo olana atrehin'ny olona ankehitriny. Izy io dia afaka manampy ireo mitady fiarovana amin'ny fananana amin'ny raharaha mbola miandry. Io ihany koa ny fomba iray hanamaivanana ny fampandrenesana ny governemanta tsy maharitra.
Azo antoka fa tsara kokoa ny mitambatra kaontin'ny banky any ivelany raha atokisan'ny fiarovana ny fananana. Miaraka amin'ity fitambarana ity dia afaka miaro fiarovana amin'ny fananana mahazatra. Anisan'izany loza izany ny fisaraham-panambadiana, ny tsenam-piainan'ny tsena na ny fanamoriana. Ireo loza ireo dia fihaonan'ny maro any amin'ny tontolo tandrefana.
Biraon'ny Banky Offshore: Fanesorana vola, ary asa ratsy hafa
Ny banky eran'izao tontolo izao dia manana tanjona voalohany rehefa manokatra kaonty ho an'ny olona vahiny. Izany hoe, miaro ny tsara sy hanala ireo ratsy. Ny banky dia mety hahavery ny fahazoan-dàlana raha toa ny fomba hafa rehefa miahiahy ny hetsika mampiahiahy izy ireo. Mety ho very koa ny fahafahany mandoa vola amina dolara amerikana na Euros, amin'ny famoahana azy tsy ara-barotra. Noho izany, matokia, rehefa manokatra kaonty, ny banky dia tsy hamela anao hisintona amin'ny fanomezana ireo antontan-taratasy momba anao. Ho sahanin'izy ireo ny mahita loharanom-bola ilaina. Ankoatr'izay dia maniry porofo izy ireo fa avy amin'ny loharanom-dalàna avokoa ny vola. Ny sandan'ny fahazoana sy fikojakojana ny fahazoan-dàlana banky dia lehibe tokoa. Noho izany, ny banky dia tsy hamela anao hanao shortage. Rehefa tonga amin'ny fahazoana fahazarana ilaina takiana ny banky no hanamarina ireo boaty rehetra alohan'ny hanokafana ny kaontinao.
Fahadisoana ny milaza fa tsy misy vola voatifitra amin'ny kaonty any ivelany. Saingy ho hitantsika tsy ho ela, tsy dia milaza zavatra be loatra izany. Raha ny tena izy dia andeha hojerentsika ireo fari-piadidiana izay heverin'ny besinimaro ho tsy meloka. Ny sehatra antsoina hoe "azo antoka" dia manana hetsika ara-bola tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna mihoatra noho ilay lazaina hoe "toeram-pitsangatsanganana hetra". Ny sehatra lehibe "etika" dia ny fanodinam-bola lehibe sy famatsiam-bola amin'ny orinasa mpanao heloka bevava eto an-tany. Ary i Etazonia no tena ao aminy. Ny Etazonia dia nandefa ny antsasaky ny antsasaky ny vola voaforona vola teto an-tany ao anatin'ny 50. Ity tapany ity dia nadika ho tombana eo amin'ny $ 300 miliara dolara.
Mazava ho azy fa i Etazonia dia tsy ny faritra misy hetra ambony indrindra, na ny “vaventy” izay tompon'antoka amin'ity hetsika ity. Ny firenena hafa toa an'i UK sy Alemana dia mizara an'io fanavakavahana mahamenatra io. Ny vahoaka amerikana dia hetra amin'ny vola miditra manerantany. Noho izany, ny famindrana vola any am-pianarana any amin'ny fitaovana ara-dalàna mety dia maro no manome tombony ho fiarovana ny fananana. Na izany aza, dia tsy mahomby amin'ny fampihenana hetra. Ny fangaraharin'ny hetra no zava-misy vaovao, hetra evasion Ny fampiasana trano fivoahana ivelan'ny trano dia tsy mahasoa na mahomby.
Ny fiheverana diso dia ny fahazoan-dàlana / hetra any amin'ny faritry ny banky any ivelany dia ny toerana mety indrindra amin'ny famatsiam-bola ny tontolon'ny asan-jiolahy. Ny tena zava-misy anefa dia ny fahazoan-dàlana amin'ny hetra momba ny hetra avo indrindra no mametraka ny ampahany betsaka amin'ireny vola ireny. Ny fidirana amin'ny hetra ambany dia mampiseho salanisa kely kokoa amin'ny ankapobeny.
Ireo karazana zava-misy ireo, mazava ho azy, dia tsy dia fahita firy raha ny vaovao amin'ny fahitalavitra sy ny haino aman-jery. Tena diso menatra ireo sehatra voakasik'izany.
Ka araka ny hitantsika dia misy angano maro manodidina ny banky any ivelany. Rehefa mandinika kosa isika dia hitantsika fa ny banky any ivelany dia arakaraka tanteraka. Mety ho very ireo fahazoan-dàlana ireo banky, na hiharan'ny sazy henjana amin'ny fahazoana mpanjifa tsy azo antoka. Ireo mpanara-maso dia manara-maso tsy tapaka amin'ny banky momba ny firaketany mahafantatra-ny-mpanjifanao. Raha ahiana ny mpandinika banky dia misy olona mampiasa ny kaontiny iraisam-pirenena ho an'ny tanjona tsy mendrika, tsy hahazo kaonty misokatra izy ireo. Raha ampiasaina amin'ny fomba toy izany taorian'ny fisokafana ny kaonty dia ho voaroaka tsy ho eo amin'ny banky izy ireo.
Banky mitana ny fahazoan-dàlana dia miankina aminy manaraka ny fitsipika eo an-toerana sy iraisam-pirenena. Fanampin'izay, izy ireo dia tsy maintsy manaraka ny fenitra ara-bola matanjaka. Noho izany, ny banky eran'izao tontolo izao dia miasa mafy hanaraka ny lalàna. Izy ireo dia manao izay tratry ny heriny mba hitazonana ny tsara lehilahy sy ny olon-dratsy. Miankina amin'izany ny fahasalamany ara-bola.
<Ho an'ny toko 3
Ho an'ny toko 5>